Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » LGBTQ » Egwuregwu ndị nwoke ma ọ bụ nwanyị 2026: Valencia Spain nwetara nnukwu ihe
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • LGBTQ • News • Akụkọ na -agbasa na Spain • Egwuregwu • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Egwuregwu ndị nwoke nwere mmasị nwoke
Valencia mere ya. Obodo Spanish ga-eme egwuregwu Gay Games na 2026. Mgbe ọnwa ole na ole nke nkwadebe na ngosi ikpeazụ nke onye nnọchiteanya n'ihu Federation of Gay Games (FGG) n'izu a, ndị nnọchiteanya Valencian jisiri ike mee ka ndị ikpe kwenye.
Egwuregwu ndị nwoke na nwanyị bụ mmemme egwuregwu/omenala nke, ebe ọ bụ na 1982, na-enye ọnọdụ nnabata maka omume egwuregwu nke obodo LGBTQ+.
Ihe omume ahụ nwere nsonye, ​​nsonye, ​​na ụdị dị iche iche dịka ụkpụrụ ntọala ya.
Ndoro-ndoro ochichi Valencia karịrị ndị na-asọ mpi Munich, Germany na Guadalajara, Mexico, na-achọ ịbụ obodo mepere emepe, nke zuru ụwa ọnụ, nkwanye ùgwù nke ụdị dị iche iche na obodo nsonye.
Mba federation ekpebiela nkwado nke Valencia na-eburu n'uche ikike ya ịkwado ihe omume nha Egwuregwu ndị nwoke nwere mmasị nwoke. Nke a pụtara na kọmitii ahụ gara leta ebe egwuregwu nke obodo ahụ dị na saịtị ahụ lere anya na akụrụngwa akụrụngwa ya zuru oke.
Ọzọkwa, Valencia. Spain, nwere mmasị siri ike ekele maka ihu igwe ya nke nwere ihe karịrị ụbọchị 300 nke anwụ kwa afọ, gastronomy ya, na atụmatụ ọdịbendị ya. Enwekwara ike ịnweta na njikọ ya na obodo ahụ, ntinye aka ya maka nkwado na oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na karịa ohere niile maka mmepe onwe onye nke obodo ahụ na-enye mmadụ niile n'agbanyeghị okike, obodo, ọnọdụ anụ ahụ, ma ọ bụ nhazi.
Egwuregwu Valencia Gay 2026 ga-eme n'etiti Mee na June. Ihe omume a ga-ewe ihe karịrị otu izu ma bụrụkwa asọmpi nke ihe karịrị egwuregwu iri atọ. Ndị a na-agụnye egwuregwu mpaghara dịka onye na-anya ụgbọ mmiri Valencian, egwuregwu ọdịnala dị mkpa maka akụkọ ihe mere eme na omenala obodo, na colpbol, egwuregwu otu egwuregwu, na mgbe ahụ egwuregwu mmiri dị ka ịkwọ ụgbọ mmiri, ịkwọ ụgbọ mmiri, na ụgbọ mmiri polo nakwa nka agha. A ga-enwekwa egwuregwu dị ka basketball, volleyball osimiri, hockey, bọl, softball, na rugby, na ọzụzụ onye ọ bụla dị ka fencing, tennis, gọlfụ, na ịgba ígwè, yana akwụkwọ ọhụrụ dị ka e-sports na quidditch, asọmpi ahụ na-echetara ya. Harry Potter nke ndị egwuregwu na-asọ mpi site na ijide aziza n'etiti ụkwụ ha.
Ihe omume a, nke ga-agụnyekwa mmemme omenala dị iche iche, a na-atụ anya na ọ ga-adọta ndị egwuregwu 15,000 na ndị ọbịa 100,000, na-enwe mmetụta akụ na ụba maka obodo ahụ karịa 120 nde euro. N'echiche a, Egwuregwu Gay ga-abụ ihe omume egwuregwu kachasị mkpa na obodo Valencian mgbe a gachara iko America.
A ga-eme mbipụta Gay Games maka 2022 na 2023 n'ihi COVID na Hong Kong.